Madaxweyne Guudlaawe oo kormeeray buqda Baareey (SAWIRRO) | Dhacdo
Madaxweynaha Hirshabelle, Cali Cabdullaahi Xuseen (Cali Guudlaawe) ayaa maanta kormeeray buqda Baareey, xilli gelinkii dambe ee Isniintii uu kormeeray buqda Mookeey.
Labadan buq ayaa ah labada buq ee tuulooyinka hoostagga Magaalada Jowhar kaga fatahay Webiga Shabelle. Fatahaadahaan ayaa go’doomiyay Magaalada Jowhar, ka dib markii ay jareen labada waddo ee magaaladaasi laga galo.
Madaxweynaha Hirshabelle oo kormeerkiisan ay ku wehliyeen Wasiiro, Xildhibaano iyo Maamulka Gobolka Shabellaha Dhexe ayaa soo indha-indheeyay goobta uu fatahaadda ka sameeyay Webiga Shabelle, oo howlo lagu moosaayo ay ka socoto.
Madaxweynaha ayaa sheegay in fatahaadaha ay saameeyen in ka badan 25 tuulo, dhibaatada ugu badana ay ku dhacday tuulada Baareey, oo dadkii deganaa ay ku barakaceen fatahaadda, xaalad adag oo dhanka noloshana ay ka jirto.
Madaxweyne Guudlaawe ayaa deeq raashin iyo dawo isugu jirta gaarsiiyay dadka ku nool tuulooyinka Baareey iyo Geedo Barkaan oo fatahaadda Webiga Shabeelle ay saameysay, isagoo Dowladda Federaalka, bulshada Soomaaliyeed iyo jaaliyadaha ugu baaqay inay u soo gurmadaan dadka ay dhibaateeyeen fatahaadahaasi.